23 May နောကျဆုံးရ လီဗာပူးလျသတငျးမြား စုစညျးမှု – Sports A2Z
မိုဆာလားနဲ့ ဟာရီကိနျးတို့ရဲ့ ရှဖေိနပျဆုလုပှဲဟာ လီဗာပူးလျရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျတနရောစာအတှကျ အမွတျထှကျလာဖှယျ ရှိနပွေီး ပရီးမီးယားလိဂျရှဖေိနပျဆု ၃ ​ဆုရှငျဖွဈလာဖို့ အီဂဈြသားကို အားပွိုငျမယျ့ ကိနျးက နောကျဆုံးပိတျ အိတျနဲ့လှယျပွီး လကျစတာကို ဂိုးမိုးရှာမယျလို့ ယူဆခံထားရ။
နညျးပွလိုငျစငျကို သကျတမျးအသဈတိုးဖို့ ယူအီးအကျဖျအရေဲ့ အကွောငျးကွားခွငျးခံထားရတဲ့ လီဗာပူးလျနညျးပွကလော့ပျအနနေဲ့ ဒီလုပျရပျကို အလှနျအမငျး အံ့အားသငျ့နတေယျလို့ သိရပွီး ဇနျနဝါရီမှာ မိခငျရဲ့နာရေးကိုလညျး မတကျရောကျနိုငျခဲ့သလို အသငျးကို အဆငျ့ ၄ အတှကျ ရုနျးကနျနခြေိနျမှာ ဘဝရဲ့အကွမျးတမျးဆုံးနှဈတနှဈကို ရငျဆိုငျနရေပွီလို့ ညညျးတှားသှား။
ဒီညပှဲစဥျတှအေပွီးမှာ လီဗာပူးလျအနနေဲ့ ခယျြလျဆီးရော လကျစတာနဲ့ပါ ရမှတျတူ၊ သှငျးဂိုးတူ၊ ဂိုးကှာခွားခကျြခငျြးတူနခေဲ့ရငျတောငျမှ အဆိုပါ နှဈသငျးစလုံးနဲ့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှု ၂ ကြော့မှာ တပှဲစီနိုငျ၊ တပှဲစီရှုံးထားတဲ့ ကလော့ပျတို့အုပျစုက အဝေးကှငျးပိုသှငျးထားနိုငျလို့ ခနျြပီယံလိဂျတနရောစာအတှကျ အသာစီးယူနိုငျဖို့ရှိနေ။
လီဗာပူးလျနညျးပွကလော့ပျအနနေဲ့ ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲလူစာရငျးမှာ အိုဇနျ ကာဘကျနဲ့ ဂြိုတာတို့ကို ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝနရေငျတောငျမှ ထညျ့သှငျးကစားစမှော မဟုတျဘူးလို့ အံ့အားသငျ့ဖှယျ သိရပွီး ဘနျလကေို အနိုငျကနျခဲ့တဲ့ တူညီတဲ့လူစာရငျးကိုသာ သုံးစှဲသှားဖှယျရှိ။
ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနကေ့ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဥျမှာ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဟနျဒါဆနျကို အသငျးဖျောတှနေဲ့အတူ ပွနျလညျတှမွေ့ငျခဲ့ရပွီး နလေ့ညျပိုငျးထရိနျနငျမှာ ဝငျရောကျပူးပေါငျးခဲ့ကွောငျး သိရသလို ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲကိုတော့ ဝငျကစားနိုငျခွနေညျးပါးလှနျးနေ။
ဒီနညေ့ဟာ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ကို အဆုံးအဖွတျပေးမယျ့ညဖွဈပွီး နောကျဆုံးမိနဈအထိ ဇာတျလမျးအခြိုးအကှတှေ့နေဲ့ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားရဖို့ ရှိနခြေိနျမှာ ပဲလစျေ့အဓိကလူတှဖွေဈတဲ့ ဘနျတီကီ၊ ဆာခို၊ ဝဈချဟမျးနဲ့ မီလီဗိုယဗေဈချြတို့ လှဲခြျောဦးမှာဖွဈလို့ သတငျးကောငျးဖွဈလာ။
အနျဖီးလျကှငျးထဲကို တကြော့ပွနျရောကျရှိလာမယျ့ ပရိသတျ ၁ သောငျးကြျောကို မွငျတှခေ့ငျြလှနျးလို့ မစောငျ့နိုငျလောကျအောငျ ဖွဈနမေိတယျလို့ ကလော့ပျက ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲကွိုမှာ ရငျဖှငျ့သှားခဲ့ပွီး မဈဒယျဘရော့ကိုသှငျးတဲ့ ဗိုငျနယျဒမျရဲ့ဂိုးကွောငျ့ မိမိအသငျး ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရခဲ့ဖူးသလို ဒီညမှာလညျး ထပျတူလုပျပွနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျထား။.
ဘာစီလိုနာရဲ့ ပွငျသဈစတားကွီး ဂရိဇျမနျးကို လီဗာပူးလျအသငျးက ပေါငျ ၄၃ သနျးနဲ့ ချေါယူမယျလို့ သတငျးတှတေောကျလြှောကျပွေးနတောဖွဈပွီး ငှလေိုနတေဲ့ ကတျတလနျအသငျးက ရာသီကုနျမှာ သူ့ကို သခြောပေါကျရောငျးထုတျလိုနသေလို ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို နောကျတကွိမျ ကိုငျမွှောငျခငျြနတေဲ့ လီဗာပူးလျရဲ့ အစီအမံလညျးဖွဈနေ။
ယူနိုကျတကျနညျးပွဟောငျးကွီး ဖာဂူဆနျဟာ အဝေးကှငျးသှားကစားတိုငျး အနျဖီးလျရဲ့ ပရိသတျအငျအားကို ကွောကျအားပိုခဲ့ရတာလို့ ဝနျခံသှားခဲ့ပွီး အနျဖီးလျလူထုရဲ့ ပေါကျကှဲအားဟာ ယူနိုကျတကျကစားသမားတှကေိုပါ ကွောကျစိတျကူးစကျစမှောဟာ ဖာဂူဆနျ အမွဲစိုးရိမျနခေဲ့ရတဲ့ ပွဿနာဖွဈတယျလို့ ဂယျရီ နဗီးလျကပါ ပွောကွားသှား။
မိုဆာလားနဲ့ ဟာရီကိန်းတို့ရဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုလုပွဲဟာ လီဗာပူးလ်ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်တနေရာစာအတွက် အမြတ်ထွက်လာဖွယ် ရှိနေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ရွှေဖိနပ်ဆု ၃ ​ဆုရှင်ဖြစ်လာဖို့ အီဂျစ်သားကို အားပြိုင်မယ့် ကိန်းက နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်ပြီး လက်စတာကို ဂိုးမိုးရွာမယ်လို့ ယူဆခံထားရ။
နည်းပြလိုင်စင်ကို သက်တမ်းအသစ်တိုးဖို့ ယူအီးအက်ဖ်အေရဲ့ အကြောင်းကြားခြင်းခံထားရတဲ့ လီဗာပူးလ်နည်းပြ ကလော့ပ်အနေနဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ကို အလွန်အမင်း အံ့အားသင့်နေတယ်လို့ သိရပြီး ဇန်နဝါရီမှာ မိခင်ရဲ့နာရေးကိုလည်း မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သလို အသင်းကို အဆင့် ၄ အတွက် ရုန်းကန်နေချိန်မှာ ဘဝရဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံး နှစ်တနှစ်ကို ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ ညည်းတွားသွား။
ဒီညပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာ လီဗာပူးလ်အနေနဲ့ ချယ်လ်ဆီးရော လက်စတာနဲ့ပါ ရမှတ်တူ၊ သွင်းဂိုးတူ၊ ဂိုးကွာခြားချက်ချင်းတူနေခဲ့ရင်တောင်မှ အဆိုပါ နှစ်သင်းစလုံးနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု ၂ ကျော့မှာ တပွဲစီနိုင်၊ တပွဲစီရှုံးထားတဲ့ ကလော့ပ်တို့အုပ်စုက အဝေးကွင်းပိုသွင်းထားနိုင်လို့ ချန်ပီယံလိဂ်တနေရာစာအတွက် အသာစီးယူနိုင်ဖို့ရှိနေ။
လီဗာပူးလ်နည်းပြကလော့ပ်အနေနဲ့ ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲလူစာရင်းမှာ အိုဇန် ကာဘက်နဲ့ ဂျိုတာတို့ကို ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေရင်တောင်မှ ထည့်သွင်းကစားစေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အံ့အားသင့်ဖွယ် သိရပြီး ဘန်လေကို အနိုင်ကန်ခဲ့တဲ့ တူညီတဲ့လူစာရင်းကိုသာ သုံးစွဲသွားဖွယ်ရှိ။
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟန်ဒါဆန်ကို အသင်းဖော်တွေနဲ့အတူ ပြန်လည်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး နေ့လည်ပိုင်း ထရိန်နင်မှာ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်း သိရသလို ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲကိုတော့ ဝင်ကစားနိုင်ခြေနည်းပါးလွန်းနေ။
ဒီနေ့ညဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့်ညဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမိနစ်အထိ ဇာတ်လမ်းအချိုးအကွေ့တွေ့နဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရဖို့ ရှိနေချိန်မှာ ပဲလေ့စ်အဓိကလူတွေဖြစ်တဲ့ ဘန်တီကီ၊ ဆာခို၊ ဝစ်ခ်ဟမ်းနဲ့ မီလီဗိုယေဗစ်ခ်ျတို့ လွဲချော်ဦးမှာဖြစ်လို့ သတင်းကောင်းဖြစ်လာ။
အန်ဖီးလ်ကွင်းထဲကို တကျော့ပြန်ရောက်ရှိလာမယ့် ပရိသတ် ၁ သောင်းကျော်ကို မြင်တွေ့ချင်လွန်းလို့ မစောင့်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေမိတယ်လို့ ကလော့ပ်က ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲကြိုမှာ ရင်ဖွင့်သွားခဲ့ပြီး မစ်ဒယ်ဘရော့ကိုသွင်းတဲ့ ဗိုင်နယ်ဒမ်ရဲ့ဂိုးကြောင့် မိမိအသင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရခဲ့ဖူးသလို ဒီညမှာလည်း ထပ်တူလုပ်ပြနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထား။.
ဘာစီလိုနာရဲ့ ပြင်သစ်စတားကြီး ဂရိဇ်မန်းကို လီဗာပူးလ်အသင်းက ပေါင် ၄၃ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူမယ်လို့ သတင်းတွေတောက်လျှောက်ပြေးနေတာဖြစ်ပြီး ငွေလိုနေတဲ့ ကတ်တလန်အသင်းက ရာသီကုန်မှာ သူ့ကို သေချာပေါက်ရောင်းထုတ်လိုနေသလို ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို နောက်တကြိမ် ကိုင်မြှောင်ချင်နေတဲ့ လီဗာပူးလ်ရဲ့ အစီအမံလည်းဖြစ်နေ။
ယူနိုက်တက်နည်းပြဟောင်းကြီး ဖာဂူဆန်ဟာ အဝေးကွင်းသွားကစားတိုင်း အန်ဖီးလ်ရဲ့ ပရိသတ်အင်အားကို ကြောက်အားပိုခဲ့ရတာလို့ ဝန်ခံသွားခဲ့ပြီး အန်ဖီးလ်လူထုရဲ့ ပေါက်ကွဲအားဟာ ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေကိုပါ ကြောက်စိတ်ကူးစက်စေမှာဟာ ဖာဂူဆန် အမြဲစိုးရိမ်နေခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်ကပါ ပြောကြားသွား။